Turubka “Deck Card” - Land Of Punt
Tarikhda turubka iyo meesha uu inagaga yimiba ma,cada. Tarikhyahanka turubka waxay ku arooriyan in wadamada bariga shishe lagasoo waariday oo wadanka China ugu shisheeyo iyo wadama galbeedka kasoo xiga Turkmanistan, Iran ilaa wadamada af carabiga ku hadla. Tarikhyanka turubku waxay sheegan in dadka madaxdahi ciyaarijireen wakhtigana isku dhaafin jireen. Qarnigii 14aad ayuu ayuu turubku usoo talaabay wadamada galbeedka oo iyaguna sii casriyeeyey isagoo kasoo galay xagaa iyo Masar. Tarikhyanka ku xeel dheer turubka qaarkod waxay si adag ugu doodan in turubka bilowgii ay isticmaalijireen firaaciintii oo iyagu aan madaalo u haysan lakiinse cilmi iyo aqoonta xidigiska u haystay iyo qaab khariirada meereyaasha ay ugu sawirnaayen.
Inaku waxaynu danaynaynaa hagardaamoyinka kujira ee sixiroolayaashu kusoo gabadeen iyo cilmi falaga aan diinta laga ogolayn ee ku dheehan turubka. Waxaynu sikooban ugu eegaynaa sirta ku jirta iyo nuxurka “SYMBOLISM” ee uu turubku xambaarsanyahay.
Turubku wuxuu ka kooban yahay calaamado, lambaro iyo sawiro. Calaamaduhu waa afar kalanooc ah oo lababa isku kaladhyihiin. Waxay kalayihiin dheeman, waran, wadne iyo budh. Calaamadaha waxaa raaca lamaro (1,2,3) oo ka turjumaya qiimaha/mustawaha kaadhka. Sawirada turubka kujiraa waa sadex waa oday “BAASHE”, islaan “RAANI” iyo Wiil “QULAAN”. Sadexda sawir ayaa ka sareeya calaamdaha.
A. 52 kaadh waa 52 usbuuc,
B. Afar nooc ee lababa isku kaladhyihiin waa afarta xili ee sanadku ukala baxo (gu’, jiilal dayr iyo xagaa)
C. Sadexda sawir (e.x oday, islaan & wiil) sadexda biloow (e.x. January, Feberuary, iyo Mars) ee israaca sanadka
D. Sadexda sawir ( Oday, Islaan & Wiil) ee ka kalasocda afarta qaybood ee labana cadaanka tahay labana casaanka tahay waa 12 biloow ee sanadka. Xisaabadka markaad isugaysid waxaa iyaguna kusoo baxaya maalmaha uu sanadku ka koobanyahay 364/5.
Waxaynu dareemaynaa in qaabka uu turubku udhisan yahay shabaho wakhtiga iyo sanad xisaabedka aynu isticmaalno si farshaxaysan loogu dhexsameeyey kaadhka turubka uu kasameysan yahay. Waxaa iyana sii raaca oo xisaabta buuxiyana afarta calaamadood (e.x dheeman, wadne, budh & waran) oo dhankooda utaagan lab iyo dhedig “Passive & active Form”. Calaamdaha madowga (budhka, waranka) waa labka, halka calaamadaha casaanka sita ay noqonayaan (wadne, dheeman) dhediga. Cilmiga hawada iyo xisaab sanadeedka waxaa lagu yaqaan oo isticmaala sixiroolayasha “magicians” oo kusoo xaadiriya ama ku xoojiya cilmiga ay adeegsanayaan.
Caadiyan, turubka waxaa ciyaara afar qof oo sali kuwada fadhiya iskana soo horjeeda. Labadii is horfadhidaa waa isku dhinac waxayna turubka la dhigayaan labada kale. Fadhiga layskaga soo horjeedo wuxuu udhacaya qaab isku talab ah “cross” oo iyana xikmadeeda xambaarsan. Astaan/calaamda isku talaaba meelokale ayeynu kaga sheegaynay wakhti ku limin mayno waxaynu tilmaamayna uun inaytahay calaamad Ibliisku loo nisbeeyo cilmina ku ladhanyahay. Fadhiga laysku horfadhiya waa astaanta koobad ee Ibliis albaabka lagaga furayo oo sidadban loo xusayo.
Calaamadaha turubka (e.x. wadne, waran, budh & dheeman) waa sumado soojiita ama lagusoo xaadiriyo shaydaanka marka laga yimooda labka iyo dhediga oo laftarkooda aynu odhankarno waxay qayb kayihiin astaamahan soojidanayan ama lagusoo xadiirinayo cilmi sirtan ay adeegsanayaan sixiroolayashu calaamad kastaana waxay qaabilsan tahay ama ku fadhidaa turubka micne gaar ah oo samaynay.
Waxaa ku xiga sawirada oo ka turjumaya sadex ilaah oo isdhalay markaydoonana kali-kali utaagan “Trinity”. Sadexdan ilaah ee wadasocda meelo badan oo lahalmaala isla cilmigaas ayaa ku arkay, waxay muhiim uyihiin oo isticmaala sadexdan ilaah dadka ku shaqaysta cilmi qaybka iyo jinn lashaqaysiga oo aynu tarikhda ku hayno ilaa wakhtigii Babalooniya. Sadexdan sawir ee wadasocda ee isdhalay waxay shabahaan Nimruud “BAASHE” oo sheegtay ilaahay. Waxaa ku xigay oo ilaahnimada sheegtay xaaskisa Zamirames “RAANI”. Zamiraames waxay dhashay Tammuz “QULAAN” oo markii hooyadi dhimatay sheegtay ilaah. Waxaynu ka warhaynaa in Quraanka Alle inoogu sheegay in wakhtigaa uu noola Nimruud iyo Baboloniyiintu adeegsan jireen sixir cilmigiisu sareeyo oo ILAAHAY inooga digay inaynaan isticmaalin. Cilmigii Baabil ayaay soo waarideen yahuudu oo kitaab ay ulabaxeen “Kabala” kusoo daabacdeen. Kalmadaha iyo xurruf dheeradka ah ee loo isticmaalo turubka dhamaantod waa afka yahuuda ee hibruuga. Dadka cilmigan bartaana waxay ku khasban yihiin inay kitaabka KABALAHA marka hore wax ka ogaadan intaanay turubka iyo cilmiga lasocda baran.
Astaamahan iyo sawirada turubka waxaa ka hela oo isticmaala dadka mala,awaal jila sida sixiroolasha dadka indhosarcaadka sameeya iyo dadka nolosha ku dheeldheela ee aan akhirada ku xisaabtamin. Turubku wuxuu udub dhigeed u yahay khamaarka “gambling”, Khamaarkuna wuxuu soojiita khamriga, tumashada, been, dil iyo inlaysku dhaco. “Turubka waxaa daabaca “Thomas De La Rue & Company” WAA ilsa shirkada dunida udaabacda xaashida laga sameeyo lacagta “Bank notes” oo dadka qaar aminsanyihiin in cilmi aan wali lafahmin ku ladhanyahay.
Fadhiga layskaga soo horjeedo ee iskutalaabta iyo turubka gacanta lagu hayo ee xambaarsan astaamaha kala gedisan waa wakhti lumis waana shaydaan xusid “Ritual” waana xaaran.
Deck Card Turubka Turubka “Deck Card”